﻿Download I-Microsoft Office Language Interface Pack 2007 isiXhosa from Official Microsoft Download Center
HausaIgboInuktitut (Latini)Isi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-AmharikhiIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosiniya (isiSirilikhi) saseBosniaIsiBhosniya (Latini)IsiFarsiIsiFilipinoIsiGalishiyaIsiGujaratiIsi-IndoneshiyaIsiJojiyaIsiKannadaIsiKhatalaniIsiKhmerIsiKonkani IsiKyrgyzIsiLaoIsiMalayalamIsiMalayi (saseBrunei Darussalam)IsiMalayi (saseMalaysia)IsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPediIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsi-UrduIsi-Uzbek (iLatini)IsiVietnamIsiWelshiIsiXhosaIsiYorubaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliSetswana (Aforika Borwa)umAyirishi
I-Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - isiXhosa ibonelela isiXhosa nge-user interface :
Iyafuneka i-Software: Inguqulelo IsiNgesi (U.S.) layo nayiphi na isuti ye-Microsoft Office 2007 iqulethe i-Excel, i-Outlook, i-Powerpoint okanye i-Word.
Iimfuneko zesithuba sediski: Ukongezelela kwisithuba se-hard disk esisetyenziswa yi-Office 2007 yeprogram esandulu' ukufakelwa, ama-20 megabytes (MB) esithuba esifumanekayo se-hard disk siyafuneka.
Ukufakela oku khuphela:
Khuphela LanguageInterfacePack.exe ifayili ngokucofa Khuphela iqhosha (ngasentla) uze ugcine ifayili kwi-hard disk yakho.
Cofa kabini LanguageInterfacePack.exe ifayili yeprogram kwi-hard disk yakho ukuqalisa i-Setup program.
Landela imiyalelo ekwisikrini ukugqibezela ufakelo.
Yakuba igqityiwe ukufakelwa ifayili engu-readme kwi-Microsoft Office 2007 Language Interface Pack inokufunyanwa ku-C:\_Program Files\_Common Files\_microsoft shared\_OFFICE12\_LCID\_LIPread.htm
I-Upgrading ye-Office 2003 ne-Office 2003 Language Interface Pack kwi-Office 2007 ne-Office 2007 Language Interface Pack ayixhaswa. Ukuba unqwenela uku-upgrade ufakelo lwakho lwesiseko lwe-Office 2003 kwi-Office 2007 ne-Office 2007 Language Interface Pack kumele u:
Ungafakeli i-Office 2003 Language Interface Pack
Sebenzisa i-Office 2007 kwi-setup uze ukhethe i-upgrade option.
Xa i-Office 2007 setup igqityiwe, fakela kwaye wakhele i-Office 2007 kwi-Language Interface Pack
Ukuba unengxaki nokufunda yonke iKhowudi yofakelo kwidayalogu ye-"Microsoft Office Activation Wizard", okanye yonke ikhowudi yofakelo ayibonakalisi ngokuchanekileyo xa usebenzisa eyakho i-Microsoft® Office Language Interface Pack 2007, nceda yekisa iwizadi kwaye uswitshele kwimveliso [ulwimi lwesiseko] yakho ukuvuselela imveliso yakho ye-Microsoft Office.
Ukuswitshela i-User Interface yakho kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - isiXhosa, landela la manyathelo:
Yazisa I-Language Settings ye-Microsoft Office 2007 esuka Start\_All Programs\_Microsoft Office\_Microsoft Office Tools kwimenyu.
Khetha i- i-Display Language thebhu naku- Iimenyu ze-Display Microsoft Office kunye nee-dialog boxes ku-: luhlu olungezantsi, khetha ulwimi ofuna ukulubonisa. Ulwimi olukhethileyo malube yi-default display ngoku.
Kwi- i-Display Language thebhu ngoku une-option yokuba i-Office display imatane ne-Windows display yakho. Ulwimi lwakho lwangoku lwee-Windows luya kuba kuluhlu lwakho. Ukuba ufuna ukuba ne-Office display ematana ne-Windows display yakho khetha Seta ulwimi lwe-Microsoft Office display lumatanise nolwimi lwe-Windows display language phawula ibhokisi. Le setting ayiluhoyi ukhetho olwenza ku- Iimenyu ze-Display Microsoft Office nakwii-dialog boxes luhlu.
Kwi Ii-Editing Languages thebhu khetha ulwimi ofuna ukulwenza lusebenze Ezikhoyo ii-Editing Languages kuluhlu uze ucofe Yongeza. Ulwimi olukhethileyo ngoku kumelwe ludweliswe Ii-Editing Languages ezincediweyo kuluhlu.
Kwi- Ii-Editing Languages thebhu khetha ulwimi ofuna lube yi-Primary Editing Language yakho i-Primary Editing Language kuluhlu.
Cofa ku- OK weqhosha.
ii-setting zolwimi ozikhethileyo ziya kwenzeka kwixesha elilandelayo xa uqala ii-Office applications zakho.
Qaphela: I-Help alunakutshintshelwa kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - isiXhosa. I-Help iya kusoloko ikulwimi lokufakela kwakho kokuqala.
Soloko uyibonisa i-help kuluhlu olungezantsi kulwimi lwesiseko.
Ukususa olu khuphelo:
Landela la manyathelo akwi-Windows XP Home okanye kwi-Professional Edition:
Yeka zonke ii-program.
Cofa kabini Yongeza okanye Susa ii-Program iayikhoni ekwi-Windows Control Panel.
Cofa Microsoft Office Language Interface Pack 2007 kwi- Kwii-programs ezisandul' ukufakelwa bhokisi, wandule ucofe u- Susa weqhosha.
Landela imiyalelo ekwisikrini.
Landela la manyathelo aku-Windows Vista:
Yeka zonke ii-programs.
Cofa kabini ii-Programs nee-Features Iayikhoni ekwi-Windows Control Panel.
Kwi- Musa ukufaka okanye Tshintsha i-Program option, cofa i-Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - isiXhosa kwi- Program ezisandul' ukufakelwa bhokisi, wandule ukhethe Musa ukufakela i-option.